13 su'aalood oo macmiilka ah marka la sameynayo astaan ​​| Abuurista khadka tooska ah
La tayada astaantamarka laga reebo haysashada a qaab quruxsan, nidaamsan oo sax ahWaa inay muujisaa waxay shirkaddu rabto oo ay ogaato sida looga garto tartanka.
Isla markaana ay leedahay si loo qanciyo macaamilka, waa kuma kan ugu horeeya ee doonaya astaanta. Si loo abuuro astaan ​​ka weyn dhammaan rajooyinka la abuuray, macluumaadka lagama maarmaanka ah waa in la soo ururiyaa ka hor inta aan la bilaabin qaabeynta. Waa kuwan 16 su'aalood oo la isweydiiyo ka hor intaadan u dhaadhicin ganacsiga.
1 13 Su'aalo oo la Weydiiyo Macaamilka
1.1 1. Sideed ugu qeexi lahayd shirkaddaada 1 ama 2 jumlad?
1.2 2. Maxay yihiin ereyada muhiimka ah ee lagu tilmaamayo meheraddaada?
1.3 3. Maxaa shirkaddaada ka duwan kuwa kale?
1.4 4. Yuu yahay bartilmaameedkaagu?
1.5 5. Waa kuwee kuwa kula tartamaya?
1.6 6. Astaamo noocee ah ayaad jeceshahay ama aad neceb tahay?
1.7 7. Waa maxay sababta loo abuuray astaan ​​cusub?
1.8 8. Sidee loo isticmaali doonaa astaanta cusub?
1.9 9. Dookhyada midabka?
1.10 10. Ma halkudheg baa jira?
1.11 11. Goormaad rabtaa in loo qaabeeyo?
1.12 12. Immisa miisaaniyadeed?
1.13 13. Ma jiraan wax kale oo ay tahay inaan ogaado?
2 Su’aalaha aad isweydiiso
2.1 1. Macaamiisha filashadeedu macquul ma tahay?
2.2 2. Ma sameyn karaa waxa macmiilku doonayo?
2.3 3. Miyaan si cad ula hadlay macmiilka?
13 Su'aalo oo la Weydiiyo Macaamilka
1. Sideed ugu qeexi lahayd shirkaddaada 1 ama 2 jumlad?
Astaanta waa inay matalo ganacsiga macmiilkaaga, haddii kale ma shaqeyn doonto. Laba jumladood ayaa ah kuwa kufiican in lagu sharaxo waxa shirkada ama shirkada macmiilku horumariso ama abuurto.
2. Maxay yihiin ereyada muhiimka ah ee lagu tilmaamayo meheraddaada?
Halkan ayaa lagu qeexi doonaa dhawr erey adeegyada sharraxa ama alaabada shirkadda.
3. Maxaa shirkaddaada ka duwan kuwa kale?
Waa muhiim ogow sida ay u kala soocdo alaabada ama adeegyada macmiilka kuwa kale.
4. Yuu yahay bartilmaameedkaagu?
Astaan ​​loogu talagalay dhalinyarada ayaa aad uga duwanaan doonta mida lagu bartilmaameedsado dadka waaweyn. Waa inaad ogaataa macaamiil macquul ah badeecooyinka ama adeegyada macmiilkaaga.
5. Waa kuwee kuwa kula tartamaya?
Ogaanshaha cidda ay yihiin tartamayaasha macmiilkaagu waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameyso a cilmi baaris. Isla marka aan ogaano sida astaamaha tartanku u eg yihiin, waxaan qaabeyn karnaa mid wax ka duwan oo iskiisna u kala duwan.
6. Astaamo noocee ah ayaad jeceshahay ama aad neceb tahay?
Tani waxay muhiim u tahay ogow fikradaha ama dhadhanka macmiilka si loo ogaado waxa aan la qaban karin, maadaama aan la imaan karno astaan ​​macmiilku si lama filaan ah u neceb yahay.
7. Waa maxay sababta loo abuuray astaan ​​cusub?
Haddii shirkadda ama shirkaddu horey u leeyihiin astaan ​​oo ay tahay raadinaya naqshad cusub, waa inaad ogaataa sababaha. Maxay yihiin ujeedooyinkaaga ama maxaad u malaynaysaa inay ka maqan yihiin astaantii hore.
8. Sidee loo isticmaali doonaa astaanta cusub?
Waa inaad ogaataa sida loo adeegsan doono astaanta, haddayba ku jirto degel ama kaar ganacsi ama goob kale. Waxaa jira nashqado cayiman oo aan u shaqeynaynin si isku mid ah hadey yihiin kuwo daabacan ama kuwa internetka ah.
9. Dookhyada midabka?
Haddii macaamilku horeyba u ahaa loo yaqaan naqshadaha midabka qaarkood, waxay ku habboonaan laheyd in loo isticmaalo midabadaas qaabka cusub.
10. Ma halkudheg baa jira?
Haddii macmiilku lahaa halkudheg taasi waa in loo keenaa astaanta, waa in la ogaadaa. Way ka fududahay in mashruuc lagu shaqeeyo halkudhig intay wax qaabaysan lahaayeen iskuna dayi inaad hadhow sameyso.
11. Goormaad rabtaa in loo qaabeeyo?
Maadaama ay jiraan macaamiil qaar markiiba way rabaan Waa muhiim in la ogaado waqtiga ay qaadan doonto in la sameeyo.
12. Immisa miisaaniyadeed?
Miisaaniyadda waa wax khuseeya abuurka ee mashruuca naqshadeynta. Haddii macmiilku awoodo inuu isticmaalo waxoogaa yar, waa in horay loo sii ogeysiiyo.
13. Ma jiraan wax kale oo ay tahay inaan ogaado?
Sida su'aasha ugu dambeysa, si loo ogaado haddii macmiilku ay tahay inuu la wadaago nooc ka mid ah macluumaad ama ra'yi.
Su’aalaha aad isweydiiso
1. Macaamiisha filashadeedu macquul ma tahay?
Waa inaadan waligaa aqbalin mashruuc marka macmiilku aanu bixinaynin waxa qofku codsaday. Shaqo waa la diidi karaa haddii macmiilku dalbado waxyaabo qaarkood oo aan macquul ahayn.
2. Ma sameyn karaa waxa macmiilku doonayo?
Waa inaad isweydiisaa haddii uu awoodo inuu waxqabad sameeyo waxa macmiilku rabo, maadaama adiga laftaadu tahay tan sida ugu fiican looga yaqaan kiiskan. Marnaba waa inaynaan aqbalin mashaariic ka baxsan xadkayaga.
3. Miyaan si cad ula hadlay macmiilka?
Waxaadan waligaa rabin waa taas macmiil baa dhaha hal shay si aad mid kale ugu keento. Waa lama huraan in macmiilku ogyahay waxa ay yihiin shahaadooyinkaaga, ballanqaadyadaada iyo taariikhaha lagu heshiiyey.
Haddii aad tahay naqshadeeye ama macmiil oo aad rabto shaqo qiimo jaban, waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa mid ka mid ah aaladaha badan ee la heli karo abuuri astaamo bilaash ah oo aad ka heli karto adigoo gujinaya xiriiriyeha aan hadda kaaga tagnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » 13 su'aalood oo la weydinayo macaamil kahor sameynta astaan
Aad u fiican. Mahadsanid